Erik Lamela ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပင်မစာမျက်နှာ တောင်အမေရိကဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အာဂျင်တီးနားဘောလုံးကစားသမားများ Erik Lamela ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်လူသိများနေတဲ့ဘောလုံး Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; "ခိုခို"။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Erik Lamela ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ရက်စွဲကိုမရောက်မှီတိုင်အောင်သူ၏ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ဆီသို့ထူးဆန်းသောဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်တတ်၏။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝနှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကို OFF-အသံနည်းနည်း-လူသိများအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, တိုင်းမိမိသပိတ်မှောက်အရည်အချင်းများအကြောင်းကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့သောငါတို့ Erik Lamala ရဲ့ဇီဝစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ခွင့်ပန်ပြီးမှမရှိဘဲရဲ့ Begin ကြကုန်အံ့။
Erik Lamela ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဘ0အစပိုင်း
Erik Lamela Carapachay, အာဂျင်တီးနားအတွက်မတ်လ4၏ 1992th နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်။
သူကသူ့မိခင်, မမိရိအံ Lamela နှင့်ဖခင်ဟိုဆေး Lamela မှမွေးဖွားခဲ့သည်။ သူကသူ့အစ်ကိုဖြစ်သူ, ဘရိုင်ယန်နှင့်ဆိအစ်ကိုအဲလက်စ်နှင့်အတူ Buenos Aires ၏ပြည်နယ်မှာကြီးပြင်းလာတယ်။
သူ၏အဖေ, ဟိုဆေးတူသူကို ဂါဗြေလ Batistuta နှင့်အလုပ်အကိုင်အဖြစ်ဘောလုံးကွင်းယူအားမိမိအားပေးခဲ့တယ်မိမိသား, Erik တစ်ပန်ကာ။ Erik5၏အသက်အရွယ်မှာဘောလုံးစတင်ခဲ့သည်။
သူခုနစ်နှစ်အရွယ်အဖြစ်မြစ်ပြားပူးပေါင်းခဲ့ကြပြီးနောက်ဘာစီလိုနာသတင်းများအရဘာစီလိုနာ၏မြို့ပြောင်းရွှေ့ဖို့, သူ့မိဘများအတွက် Lamela နဲ့သူ့မိသားစု£ 100,000 တစ်နှစ်အဖြစ်အိမ်တအိမ်နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ပူဇော်ကြ၏။ ဤသည်မြင်ဘူးသောတအလားတူစာချုပ်ခဲ့ Lionel Messi ကလေးငယ်များအတွက်အဖြစ်စပိန်မှရွှေ့။
ချောက်ခြားစရာကောင်းလောက်အောင်, သူ့မိဘများဘာစီလိုနာအတွက်၎င်းတို့၏သားရဲ့ကနဦးအတိုးနေသော်လည်းကမ်းလှမ်းချက်ကိုပယ်ချခဲ့။ Erik ပင်သူ့မိဘ woo တစ်ဦးလေလံအတွက်ဘာစီလိုနာအင်္ကျီပြသနိုင်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့သူ့မိဘအထင်အမြင်သေးသို့မဟုတ်မထီမဲ့မြင်နှင့်အတူဘာစီလိုနာငြင်းပယ်ခြင်းအားဖြင့်နောက်ဆုံးခေါ်ဆိုခဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ဒါ့အပြင် 2004 တစ်ဦးအတွက် ဖြတ်ကျော်ကမ္ဘာ့ဖလားအားကစား ရုပ်ရှင်အမှုထမ်းပြီးသားပဲရာသီအတွက်မြစ်ပြားရဲ့လူငယ်ဘက်များအတွက် 12 ရည်မှန်းချက်များသွင်းယူပြီးနောက်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်အောင်ခံခဲ့ရသူတစ်ဦး 120 နှစ်အရွယ် Lamela အင်တာဗျူးအာဂျင်တီးနားမှခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ တစ်စူပါကလေးဘဝဘောလုံးသမားအဖြစ်ဤမျှလောက်လူကြိုက်များပြီးနောက် Lamela သည်သူ၏ဆန္ဒ၏ခြေရာကိုနင်းလိုက်လျှောက်ရန်မိန့်တော်မူ၏ ဒီယေဂိုမာရာဒိုနာ နှင့်အာဂျင်တီးနားများအတွက်ကမ္ဘာ့ဖလားအနိုင်ရ။ ကလေးတစ်ဦးအဖြစ်သူ PlayStation ကစားခြင်းကိုချစ်၏။
အစစ်အမှန်ဖိအားသော်လည်းမှားယွင်းမှု၏နှစ်ပေါင်း၏ရလဒ်အဖြစ်စွဲချက်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဖော်ပြခြင်းမဆိုတဲ့အချက်ကိုမှ လာ. , သူ့ကလပ်သူတို့ရဲ့ 110 နှစ်သမိုင်းမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အတန်းဆင်း၏ခါနီးပေါ်ခဲ့ကြနှင့် 19 နှစ်အရွယ် Lamela ခဲ့သည် သူတို့ကိုချွေတာ၏တာဝန်နှင့်အတူဝန်ကိုထမ်းယောက်ျားသည်။
Lamela ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနေသော်လည်းကလပ်နောက်ဆုံးမှာသူတို့ရဲ့ခြောကျခြားဖွစျပွီးထောက်ခံသူကဏ္ဍများအနေဖြင့်ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများကြောင့်သတိပေးခံရတဲ့အံ့သြဖွယ်ပြဇာတ်-ချွတ်ဆုံးရှုံး, ဆက်လက်ရှင်သန်ရန်ပျက်ကွက်။
သို့သော်အပင်တစ်ပင်တစ်သစ်တောလုပ်လို့မရပါဘူး။ မြောက်မြားစွာဆုဖလားအနိုင်ရတော်မူပြီးမှ, Erik Lamela တစ်ချိန်ကဘောလုံးအနည်းငယ်ကိုဘုရားအဖြစ်လူသိများခဲ့သည်။ အကြောင်းပြချက်မိမိလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်နည်းလမ်းကစားဖြစ်ခြင်း။
သူကမြစ်ပြားနဲ့သူ့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားဘရန်ခက်ခဲတဲ့စတင်ခဲ့သည့်အခါ Lamela ရဲ့နောင်တသို့ရောက်ကြ၏။ သူ 36 ဂိမ်းကစားသာ4ဂိုးသွင်း။ ဤသည် FC အသင်းဘာစီလိုနာကိုငြင်းပယ်သည်မိမိအပေါ်ပိုပြီးနောင်တမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ သူကလာရောက်ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့်ဥရောပသို့သူ၏လမ်းအတင်းအကျပ် ရိုးမား.
Lamela ရဲ့နဲ့ ရိုးမား'' s ကိုရာသီ, သို့သော်, စီးရီးအေထဲမှာဆဋ္ဌမပြီးသွားအတူဒွန်တွဲခြင်း, အီတာလီယာဒုတိယနောက်ဆုံးများတွင်လာဇီယိုအပြိုင်ရောမမြို့မှရှုံးနိမ့်နှင့်အတူကှေဲအတွက်အဆုံးသတ်ကြောင်းအဓိပ္ပာယ် ရိုးမား ဒုတိယဆက်တိုက်ရာသီအတွက်ဥရောပဘောလုံးမကစားမည်ဖြစ်သည်။ ဒီအပယ်သွားဖို့စိတ်ပျက်စရာပြောင်းရွှေ့ဖို့ဦးဆောင် စပါး။ Lamela များအတွက်အခကြေးငွေသူ့ကိုဖွင့်ဆုကြေးငွေငွေပေးချေမှုအတွက်£ 25.8 သန်းမှစျေးအကြီးဆုံးကလပ်ရဲ့သမိုင်းအတွက်ကစားသမား£ 4.2 သန်းပေါင်းတို့ကိုလည်းလုပ်လေ၏။
Erik Lamela ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -relationship ဘဝ
သငျသညျအမြိုးသမီးတဖြစ်ကြပြီးသင်တစ်ဦးအသက်ငယ်သောသူကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားလျှင်, သင်မကြာမီသူ့ကိုထက်အလွန်ဟောင်းများကိုကြည့်ရှုမည်, သင်သူသည်နောက်တဖန်သင်တို့ဆီသို့ဆွဲဆောင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤသည်ဤမျှလောက်များစွာသောနှစ်အဘို့အလိုငှါအဟောင်းများကိုရည်းစားဆိုဖီယာ Herrero နှင့်အတူရှိခဲ့ပြီးခဲ့သူ Lamela ၏ဖြစ်ရပ်မဟုတ်ပါဘူး။
Erik အလွန်ပုဂ္ဂလိကသည်သူ၏ပုဂ္ဂလိကဘဝစောင့်ရှောက်ဖို့ချစ်တော်မူ၏။ သူသည်အဘယ်သူ၏သူနောက်ဆုံးတော့ 2010 အတွက်သူမ၏လက်ထပ်ရတဲ့မတိုင်မီနှစ်ပေါင်းများစွာရက်စွဲပါဆိုဖီယာနှင့်အတူအပေါင်းတို့သည်သူ၏အချိန်လေးသုံးစွဲသည်။
နှစ်ဦးစလုံးချစ်သူများသူတို့၏သား Tobias Lamela မွေးဖွားခဲ့သည်သည့်အခါ 25th နိုဝင်ဘာလ 2017 သည်အထိလေးတွေရှိသည်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
Erik Lamela ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -မိသားစုဘဝ
အကောင်းဆုံးကတော့, Erik ချွတ်ပေးဆောင်ဘောလုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပြုမီလူလတ်တန်းစားအာဂျင်တီးနားမိသားစုနောက်ခံကနေလာ၏။
ဖခင်: Erik Lamela ရဲ့အဖေကသူ့အသက်အရွယ်နုပျိုသောနေ့ရက်ကာလ၌အလွန်ချောမောဖြစ်ခဲ့သည်။ Lamela တစ်ချိန်ကအောက်ပါ tagline အတူ, သူ့ဖခင်နဲ့သူ့ရဲ့နုပျိုမိမိကိုယ်ကို၏ရုပ်ပုံ posted: "အထူးသဖြင့်သတ္တုတွင်းအားလုံးကိုဘိုးဘေးတို့အားမင်္ဂလာနေ့က ... ငါအဟောင်းဓါတ်ပုံတွေကိုချစ်
Instagram ကိုတွင်, Lamela အချို့ကိုပရိသတ်များအငယ်သောကာလ၌မိမိအဘ၏ရုပ်ပုံဒဏ္ဍာရီအာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှူးတူကြောင်းအကြံပြု ဂါဗြေလ Batistuta.
ဤအတောအတွင်း Twitter ပေါ်တွင်, အမာခံ စပါး ထောက်ခံသူစတိဗ် Nash ဟာ Instagram ကို link ကို retweeted နှင့်ရယ်စရာ Lamela ရဲ့ဖခင်တကယ်တော့ခဲ့ရှိမရှိသိချင်, ဒါဝိဒ်သည် Ginola။ သူ၏အဖေသည်ယခုအခါအောက်ကပုံထဲမှာထင်ရှားအဖြစ်ဖွင့်အသက်သိရသည်။
Mother: Erik Lamela ပြီးနောက်မိမိအ mum, ပျြောရှငျတဲ့မိခင်ရဲ့နေ့ဆန္ဒရှိဖို့လူမှုမီဒီယာမှယူ စပါး'' s ကိုလီဗာပူးလ်အသင်းနှင့်အတူဆွဲပါ။
အစ်ကို: Erik Lamela နာမတော်ဖြင့်ဝင်သူအစ်ကိုရှိပါတယ်; ဘရိုင်ယန် Lamela ။ ဘရိုင်ယန်လက်ျာဘက်သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကနေဘောလုံးထွက်မဖြတ်ခဲ့သည်။
သူ့အစ်ကိုတွေများထဲတွင်အောက်ပါပုံအဲလက်စ် Lamela ကသူ့ဆိတ်သငယ်ချင်းငါ့ညီ, များသောအားဖြင့်အကျိုးစီးပွားအဓိကဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။
Erik Lamela တစ်ချိန်ကသူ့ရဲ့အိမ်မှာပွဲဦးထွက်မီညတစ်စျေးမှာလက်ခံရရှိ စပါး သူ့ညီ Buenos Aires ၏သူ၏နေအိမ်တွင်မွို့၌လက်နက်ကိုင်ကားအပိုင်စီးမှုအားဖြင့်ပြန်ပေးဆွဲခဲ့ကြောင်းသတင်းနှင့်အတူ။
အီတလီမှာအစီရင်ခံစာများအဆိုအရ 18 နှစ်အရွယ် Axel Lamela သေနတ်မှာယူခဲ့ပါတယ်နှင့်ရွေးနုတ်ဖိုးမှကျင်းပခဲ့တယ်။
သူနှောင်းပိုင်းကသူ့ကိုနှင့်အတူရှိခဲ့သည့်အကြောင်းကို£ 50000 မှနှိုင်းယှဉ်ထားသည်ဟူသောန်းကျင် 5500 ပီဆိုတဲ့အခကြေးငွေများအတွက်လဲလှယ်အတွက်ပြန်ပေးဆွဲခြင်းဖြင့်ဖြန့်ချိမခံရမီနာရီအနည်းငယ်အဘို့အကျင်းပခဲ့သည်။ ရာဇဝတ်ကောင်များကဘောလုံးသမား '' မိသားစုများ၏ပစ်မှတ်တစ်ခုအဆန်းဖြစ်ရပ်ဆန်းမဟုတ်ပါဘူးနေစဉ်, ရဲတပ်ဖွဲ့ဒီဥပမာထဲမှာမှာလည်းတိုက်ဆိုင်မှုနှင့် 18 နှစ်အရွယ်ကားမောင်းခဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိသောကားမျှသာရလဒ်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
Erik Lamela ရဲ့အစ်ကို, ဘရိုင်ယန် Lamela said: ... "သူတို့ကရွေးနုတ်ဖိုးပိုက်ဆံရဖို့နဲ့ရဲပါဝင်ပတ်သက်ကြဘူးသေချာစေရန်ကျွန်တော်တို့ကိုသို့ပြောသည်။ သူတို့ကပိုက်ဆံစုဆောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ရှေ့တံခါးသို့ရောက်ကြ၏။ သူတို့ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောသူတို့သည်ငါတို့အိမ်မှာသူတို့ရဲ့မျက်နှာများနှင့်လုံခြုံရေးကင်မရာများမဖုံးခဲ့ပါဘူး။ ငါ့အစ်ကိုအေးဆေးပါပဲ။ ကြှနျုပျတို့အားလုံးကကျပန်းအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ခဲ့သည်ထင် - သူတို့ရိုးရိုးကားများနှင့်အခြားဘာမျှမအဘို့သူ့ကိုပြန်ပေးဆွဲ "။
တစျဖနျ, တူညီတဲ့ကံအဲလက်စ် Lamela တစ်ဖန်၎င်းတို့၏ဇာတိအာဂျင်တီးနားအတွက်ရေကူးကန်၌သူ၏ခေါင်းကို banged ။ အဆိုပါပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသွက်ချာပါဒမှရလဒ်ဖြစ်သောသင်္ချိုင်းတွင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ လအနည်းငယ်အဘို့, အဲလက်စ်ဘာမှမရွှေ့နိုင်ဘူး။ သူကနောက်ကျောအချို့သောလှုပ်ရှားမှုတယ်ခင်ကအချိန်အများကြီးယူခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက်သူသည်သာမန်ဘဝပြန်သွားဖို့နေ့စဉျအလုပ်လုပ်စတင်ခဲ့သည်။ မတော်တဆမှုများထိုအချိန်တွင် Lamela တစ်ဦးတင်ပါးဆုံရိုးပြဿနာနှင့်အတူထွက်ခဲ့ပါတယ်။
Erik Lamela ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
Erik Lamela ခေါ် '' ခိုခို '' သည်သူ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအောက်ပါ attribute တွေရှိပါတယ်။
Erik Lamala ရဲ့အားသာချက်များ: Erik, သနားကြင်နာတတ်တဲ့အနုပညာအလိုလိုသိနှင့်သဘောသဘာဝအတွက်အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သည်။
Erik Lamela ရဲ့အားနည်းချက်များ: Erik အလွန်ကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်ခြင်းနှင့်အဖြစ်မှန်မှလွတ်မြောက်ရန်ဆန္ဒအပိုင်နိုင်ဘူး။
အဘယ်အရာကို Erik Lamela likes: Erik Lamela တစ်ဦးတည်းဖြစ်ခြင်းချစ်တော်မူ၏။ ထို့အပြင်သူသည်အိပ်ပျော်နေသော, ဂီတ, အချစ်ဇာတ်လမ်း, အမြင်အာရုံမီဒီယာ, ရေကူးခြင်းနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာ themes များ likes ။
Erik Lamela နှစ်သက်မှုမရှိကဘာလဲ: သူတို့သိပါ-It-အားလုံးတောင်းဆိုသူကလူများ, အတိတ်သူ့ကိုသရဲခြောက်ဖို့နောက်ကျောလာမယ့် (ဥပမာ: သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကာလအတွင်း FC အသင်းဘာစီလိုနာငြင်းပယ်) နှင့်နောက်ဆုံးမဆိုကြင်နာ၏ရက်စက်မှု။
Erik Lamela ဘာမှပြန်ရရှိရန်မျှော်လင့်ခြင်းမရှိဘဲ, အမြဲတခြားသူတွေကိုကူညီပေးဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ်။ သူ၏အသက်တာစာနာမှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။
Erik Lamela ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် အဆိုပါ Rabona
Erik Lamela တစ်ချိန်ကအဘယ်ကြောင့်သက်သေပြမယ့်လေလံအတွက်အံ့သြစရာရည်မှန်းချက်သွင်းယူ စပါး မိမိအန်ဆောင်မှုများအတွက်£ 30million ထွက်လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ် ခဲ့. ။ အဲဒါကို 'သည်သူ၏ 20-ခြံထက်မကအခြားင်rabonaAsteras ထရီပိုလီဆန့်ကျင်သည်သူ၏ europea လိဂ်လည်စည်းထဲမှာလာသောစပါးများအတွက် '' ရည်မှန်းချက်။
ချောက်ခြားစရာကောင်းလောက်အောင်သည်အံ့မခန်းကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကပြောင်းရွှေ့မခံခဲ့ရသူသာလူတစ်ဦးမန်နေဂျာခဲ့သည် Mauricio Pochettino, သူ့နည်းပြန်ထမ်းသူတို့ခြေမှခုန်ထွက်သကဲ့သို့အဘယ်သူမျှမစိတ်လှုပ်ရှားမှုပြခဲ့သူ။
အဆိုပါကြေးနန်းမှ Erik Lamela ရဲ့စကားမှာတော့သူပြောကြားခဲ့့သည်က ..."ငါသည်ကိုယ့်အသင်းတိုးတက်မှုကိုအတူတကွအကြောင်းပြောနေတာကြိုက်တတ်တဲ့နှင့်ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ ငါ '' နှင့်တူသောအရာတို့ကိုအကြောင်းပြောနေတာမကြိုက်ဘူးrabona'' ။ ငါလူငယ်တစ်ဦးကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်အခါ, ငါပွုဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူကပဲမှီဝဲ။ ဒါဟာငါကျင့်သုံးကြောင်းတစ်ခုခုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာသဘာဝကပါပဲ။ "
Erik Lamela ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် ဒဏ်ရာပုံပြင်
Erik တစ်ချိန်ကပြင်ပမှာတစ်ဦးစိတ်ဆင်းရဲ 13 လအတွင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်ကသူ၏အနာဂတ်နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ စပါးဒဏ္ဍာရီရစ်ကီဗီလာ - ကလပ်ရဲ့မန်နေဂျာ Mauricio Pochettino နီးစပ်သူသည်တစ်ဦးအာဂျင်တီးနား - တစ်ချိန်ကသူသည်နောက်တဖန်မကစားနိုင်ခဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
မိမိအနာဂတျအတှကျကိုကွောကျရှံ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်မေးသောအခါ Lamela said: ..."ဒါပေါ့။ တကယ်မကောင်းတဲ့ကာလ၌သင်အမြဲအဆိုးဆုံးလို့ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ့မိသားစုသည်ငါနှင့်အတူအစဉ်အမြဲနှင့်ထောက်ခံသူများကွင်းပေါ်မှာငါ့ကိုချင်တယ်။ သူတို့ကငါ့ကိုနေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်ရန်နှင့်စွန့်လွှတ်ဘယ်တော့မှရန်စွမ်းအင်ကိုဆောင်ခဲ့ရမည်။ "
"ငါသည်ရလဒ်မှာပြန်အစေးပေါ်မှာရှိကောင်းပေမယ့်စိတ်ပျက်ခံစားရတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, ငါအများကြီးပိုကောင်းရရှိနိုင်သည်။ အတိတ် 13 လအတွင်းအရူးခဲ့ကြသည်, ဒါကြောင့်ဖြစ်ကောင်းငါ့အသက်ကို၏အဆိုးဆုံးအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါတကယ်ကစားရန်လိုခဲ့သော်လည်းငါ့ဒဏ်ရာရှည်လျားလွန်းယူခဲ့ပါတယ်။
"မန်နေဂျာအပေါင်းတို့နှင့်အတူန်ထမ်းများအံ့သြဖွယ်ရှိကြ၏။ သူတို့ကငါ့နောက်သို့ငါနှင့်အတူအစဉ်မပြတ်ရှိကြ၏။ ပြည်သူ့ကျောငါ့ကိုလိုချင်နဲ့ကျွန်မသာအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ ငါ့မိသားစု, ငါ့ရည်းစားအမြဲပြန်ဖြစ်ငါ့ကိုတွန်း, ငါနှင့်အတူအစဉ်အမြဲဖြစ်ခဲ့သည်။ နှင့်သင်တန်းကဤမျှကာလပတ်လုံးထွက်ဖြစ်ဖို့ခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမယ့်ဘောလုံးပါပဲ။ "
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားစစ်ဆေးပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Erik Lamela ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်ရပ်မှန်ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBoggerကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်ဤဆောင်းပါး၌တရားကိုကြည့်ရှုတော်မမူကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုပါလျှင်, သင့်မှတ်ချက်ကိုနေရာကျေးဇူးပြုပြီးသို့မဟုတ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!။
EMI Buendia ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Lautaro Martinez ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Juan Foyth ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ရောဘတ် Pereyra ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Manuel Lanzini ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
အစဉ်အဆက် Banega ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
မားကို့စ Rojo ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
က Nicolas Otamendi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဗီယာဓမ္မဆရာများကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
အိန်ဂျယ် Di Maria ကကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်